चित्रबहादुर भन्छन्– ओलीले राम्रो गर्नेमा शंका छैन तर उनीमाथि ठूलो लोड छ
Tuesday, 13 Mar, 2018 9:16 AM
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी अहिले संसदमा छैनन् । सरल भाषामा सवैले बुझ्नेगरी बोल्ने वक्तृत्व क्षमता भएका केसी नेपाली राजनीतिका सादगी नेता हुन् । गत चुनावमा स्वास्थ्यका कारण उम्मेदवार बन्न अस्वीकार गरेका केसीलाई चुनाव जित्न एमालेले समर्थन गर्ने प्रस्ताव समेत राखेको थियो । तर, उनले मानेनन् । संसदमा आकर्षक नेताका रुपमा रहंदै आएका केसी संसद बाहिरै भए पनि राजनीति र नयाँ सरकारको मुल्यांकन गर्न भने चुकेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको प्रारम्भिक थालनीलाई सकारात्मक वताउने केसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुन सल्लाह दिए । यसै विषयमा केसीसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
तपाईँ यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । चुनावबाट बहुमत ल्याएर फेरि ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सरकारको प्रारम्भिक कामलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो सरकारको निर्माणले पूर्णता पाइसकेको छैन । कसैकोबारे केहि भन्न उसले गरेको काम त अघि आउनु पर्यो नि । सरकार नै पूरा नबनी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्न । बन्ने प्रक्रियामा छ । अहिले नै यसको आलोचना वा समर्थन केहि गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । त्यसो हुनाले यसको काम हेरौं । राम्रो भए सर्मथन, नराम्रो भए विरोध गरौंला ।
सुरुवातका गतिविधि र लक्ष्यण त देख्नु भएको छ नि, कस्तो लाग्छ ?
सुरुवात त ठीकै छ । काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा गर्न खोजेको देखिन्छ । अब कसरी अगाडि बढ्छन्, संयन्त्रहरु तिनै हुन् । तिनै संयन्त्र भित्र ओली कसरी चल्छन् हेर्न बाँकी छ ।
तपाईँले पहिलेको सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली अडान र आत्मविश्वास भएका ब्यक्ति हुन्, लामो कार्यकाल काम गर्न पाएका भए अझ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो भन्नु भएको थियो । ओली दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न पुगेका बेला ओलीबाट कस्तो आशा राख्नु भएको छ ?
मलाई विश्वास छ, ओलीजी आफ्नो अडानको पक्का हुनुहुन्छ । उहाँमा काम गर्ने ऊर्जा पनि छ । म उहाँसँगै धेरै उठबस गरेको छु । र उहाँको बारेमा यति भन्न सक्छु, आफ्ना अडान र मान्यतामा उहाँ पक्का मान्छे हो । तर उहाँ एक्लैले केहि हुन्न । मानिसहरु उनै हुन्, प्रबृत्ति उहि हो । चरित्र उहि हो । यो राणा कालदेखि थुप्रिएको भ्रष्टाचारको संजाल फ्याँक्न उहाँ एक्लैले गरेर केहि हुन्न । हामीले आशा गर्ने कुरा के हो भने मात्रात्मक परिर्वतन । निक्कै गाह्रो छ । धेरै गाह्रो छ । हेरौं सबैले साथ दिए भने केहि नतिजा निस्किएला कि ।
मात्रात्मक रुपमा परिर्वतन भयो भने पनि नेपाली जनताले केहि राहत अनुभव गर्न पाउँछन् । त्यहि ठूलो कुरा हुन्छ । नभए भाष्टिक चेन्ज ल्याउनको लागि यो भ्रष्ट संयन्त्र सबै फेर्नुपर्छ । नयाँ बनाउनु पर्छ । यहि संयन्त्रले कहिँ पुगिंदैन । यहि मेसिनरी भित्र हलचल गर्न पनि सकिंदैन ।
सरकारलाई चल्नै नदिने वाधाहरु के देख्नुहुन्छ ?
राजेन्द्र महतो, रेशम चौधरी, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह । तिनै होइनन् हिजो कैलली नरसंहार गराउने ? त्यस्ता संसदमा पुगेपछि के हुन्छ भन्नुस् त ? त्यो कैलालीमा नरसंहार गर्ने सबै त्यहाँ पुगेका छन् । त्यहाँ त्यस्ता अपराधी बसेपछि कस्तो बन्छ देश ? त्यत्रो उत्पात गर्नेलाई राजपाले चोख्याएर सांसद बनाउन खोजिरहेको छ हेर्नुस् । अनि यस्ता अपराधी, भ्रष्टहरुको वरिपरी बसेर देश बनाउन गाह्रो छ उहाँलाई ।
अर्को, शक्ति राष्ट्रहरुले पनि नेपालमा चलखेल गर्न छोडेका छैनन् । यिनिहरुका हातमा भएको हंसिया हथौडा देखेर उनीहरु जलेका छन् । त्यसले पनि उनीहरु यो गठबन्धनलाई टुक्र्याउन र यहाँ स्थिरता हुन नदिन लागिरहेका छन् । हामीले देख्दा अलि परपर भएको देखिए पनि तिनीहरु कसरी यिनीहरुलाई पछारौं भनेर लागिरहेका छन् । देख्नु भएन, दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको वितण्डा ? भाषा पनि फेर्ने, भेष कसको राखेको छ ।
चिलीमा आजभन्दा केहि वर्ष पहिले संसदीय पद्धतिद्वारा त्यहाँको राष्ट्रपति चुनिएर आएको थियो । उनीहरुसँग पनि हंसिया हथौडाको झण्डा भएकै कारणले राम्राज्यवादीहरुले उसलाई मारेरै छोडे । त्यसो हुँदा यहाँ पनि सजिलो छैन । सजिलो नहुँदै पनि गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । भ्रष्ट, तस्कर, माफिया र जनताका सत्रुहरुले असफल पार्ने प्रयास गरेका थिए । यो कम्तिमा नेपाली जनतालाई जानकारी हुन सक्यो । ती भ्रष्ट को हुन्, माफिया को हुन्, बाहिर ल्याउन सक्यो भने नै ठूलो कूरा हो । गर्नै नचाहनु र गर्दा गर्दै नहुनु दुई फरक कुरा हुन् । गर्न खोजेको थियो दिएनन् भन्ने बनाउन सक्यो भने ठूलो उपलब्धी मान्नुस् । नभए यहि सरकारले यी सबैलाई पछारेर काम ढ्याक ढ्याक गरेर देखाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन । यिनै भ्रष्टहरुका बीचमा हामीले यस्तो होला भनेर सोच्नु पनि हुन्न । जताजता बाहुन बाजे, उतैउतै स्वाहा नहोस् त्यति हो ।
यति धेरै पार्टी किन चाहियो ? धेरै पार्टी खोलेर देशलाई कहिँ पुर्याउन सकिंदैन भन्ने मान्छे तपाईं । कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकीकरण भएर अब एउटै पार्टीको तयारीमा छन् । तपाईं चाहिँ किन बाहिर ?
अहिलेको बखतमा विवाद निकाल्ने कुरा छैन । रुसमा लेलिनले लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । त्यसैमा आधारित रसियन कम्युनिष्ट पार्टीले जर्मनीमा हिटलर जस्तो र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई घुँडा टेकाएर छोड्यो । स्टालिनले पनि त्यहि सिद्धान्तले ३० वर्ष समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरे । अहिले पनि दलालहरुले साम्राज्यवादीहरुले स्टालिनलाई धारेहात लगाउँछन् । यदि समाजमा आमुल परिर्वतन नै गर्ने हो भने लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति छोडेर समाजमा आमुल परिर्वतन गर्नै सकिंदैन ।
अहिले एमाले माओवादीले लेनिनबादी सिद्धान्त छोडिसके । अव हंसिया हथौडा त छ यिनीहरुको हातमा, तर यिनीहरु त्यो धारमा छैनन् । यिनीहरुसँग कम्युनिष्ट चरित्रको ब्याज पनि छैन । त्यसैले देशमा भएका सबै कम्युनिष्ट एक भए होइन कि कम्युनिष्ट नामबाट संसदीय प्रतिस्पर्धामा रहेका पक्षहरु एक ठाउँमा आएका हुन् । त्यसैले त्यसमा हामी मिसिने कुरा भएन । यो विवाद गर्ने बेला त पक्कै पनि होइन तर, भएको कुरा चाहिँ यो हो कि मजदुर किसानको राज्य त अहिले पनि होइन । कम्युनिष्ट नाम रहेका ती सबै कम्युनिष्ट होइनन् । जबसम्म दुखी दरिद्रको, किसानको जीवनमा परिर्वतन हुँदैन तवसम्म समाज परवर्तन हुनै सक्दैन । तर, यो सरकारलाई भने हाम्रो सर्मथन रहन्छ त्यति हो ।
यी कम्युनिष्ट होइनन् भन्नुभयो । तपाईंले भने झैं हंसिया हथौडा लिएका धेरै दलको एकीकरणलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?
जसको रहनसहन मिल्छ, भेषभुषा मिल्छ, चरित्र मिल्छ, पार्टीका सबै कुरा मिल्छ अनि किन अलग अलग भन्सा ? नीति, सिद्धान्त, ब्यवहार, चरित्र मिल्नेहरु सबै ठाउँ ठाउँमा किन बस्नु पर्यो ? एक भएकै राम्रो । त्यसो भएर हामीले सर्मथन गरेका छौं जितेकोमा स्वागत गरेका छौं । विहान पनि प्रधानमन्त्रीजीले फोन गर्नुभएको थियो, के छ, कसो छ भनेर । मैले हाम्रो तपाईंहरुलाई सर्मथन छ । हाम्रो सभासदले तपाईंलाई मत दिनुहुन्छ तर, राम्रो काम गरुन्जेललाई हो यो सर्मथन पनि भनँे । तपाईंको काममा मलाई कुनै शंका छैन, तर कसरी यो लोड लिएर हिंड्नु हुन्छ यक्ष्य प्रश्न तपाईंमा छ भनँे । उहाँले हुन्छ तपाईंको सर्मथन पाइराख्ने काम गर्ने तयारीमा छु भन्नुभयो । मैले भनेँ– तपाईंलाई हाम्रो सर्मथन हुन्छ र यो सर्मथन राम्रो गर्नलाई हो । गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हो । अब तपाईंहरुको पनि ठूलो परीक्षा छ । हाम्रो समर्थन प्राप्त गरिरहन चाहिँ तपाईंहरुले उत्तिर्ण हुनैपर्छ ।
तपाईंले ओलीको कार्यशैली र आनीबानी थाहा छ भन्नुभयो । अब ओलीले चाहिँ काम कुन कोणबाट अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ?
एक नम्बर कुरा भ्रष्टाचारका कुरामा कहिँ, कतै पनि सम्झौता गर्नुहुन्न । भ्रष्टाचार सहनै नसक्ने समाज निर्माण गर्नुपर्छ । यी भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्नुपर्छ । पार्टी भित्र, देशमा, संगठनमा सबै सबैतिर । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । पहिलो काम, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सडकमै निस्कनु पर्छ । यति गर्दा पनि जनतालाई ठूलो राहत हुन्छ । भ्रष्टाचार नभएका कुनै पनि अंग छैनन् । सरकारमा गएर मन्त्री भएर टल्किएर हिंड्न बाहेक केहि गरेनन् अघिका सरकारले । सानो गमलामा रुख हुर्किएर त्यसको जराले गमला फोरेजस्तै देश धुजाधुजा बनाएका छन् । यसलाई जोड्न गाह्रो छ ओलीजीलाई । म त भन्छु– मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको पाए थुतेर सडकमा फ्याँक्न सक्नुपर्छ उहाँले । अनि मात्र देश बन्छ । सूचना संयन्त्र त्यस्तै बनाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
नेपालको अखण्डता, राष्ट्रियता कमजोर बनाउन विदेशी विषेश गरेर भारतीयहरु अहिले पनि लागिरहेका छन् । सात प्रदेशमा एउटा प्रदेश त उनीहरुले आफ्नो जस्तो गराईसके । अहिले पनि मधेसीलाई लिएर उनीहरु संविधान नै संशोधन भन्दै आइरहेका छन् । त्यसकारण देशको अखण्डता, राष्ट्रियता र सर्वभौमसत्तामा कहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने हाम्रो विरोध हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रको हैसियत बृद्धि गर्यो, एक देशीय निर्भरता तोडेर चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गर्यो । अव ओलीबाट आफ्नै कामलाई असफल पार्ने काम होला र ?
हाम्रो एकतिर मात्र भएको छिमेकी सम्बन्धका कारण नेपाललाई घुँडा टेकाउने काम भएको थियो । हामी हलचल पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा थियौं । यो यहिँका भ्रष्ट नेताका कारण भएको थियो । तर हामीलाई नाकाबन्दी समेत गराएर उसले घाँटी थिच्दा पनि नटेरी हामीले ची तिर पनि सम्बन्ध बढायौं । यसले धेरै कुरा चेन्ज भएको छ । तर ओलीको सरकार ढालेर पछि बनेको सरकारले त्यसलाई अघि बढ्न नदिने काम गर्यो । त्यसकारण हाम्रो वैरभाव त भारतीय शासक हरुसँग र नेपाल भित्रकै तर विदेशीका लागि काम गर्ने हरुसँग हो । तिनका अगाडि नेपालका नेताहरु सरेन्डर गर्छन् । त्यहि कारणले हामी फुत्कन सकेनौं । यिनीहरु विकाउ सामानको स्तरमा आफूलाई लिएर त्यहाँ जान्छन् । अहिले हेर्नुस् दुई देशसँगको सन्तुलित सम्बन्धले बल्ल देश आफ्नो ठाउँमा आएको छ । यो सम्बन्धलाई जति उपयोग गर्न सक्यो त्यति हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ ।
त्यसबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हुँदा हामीले रोक्यौं त भारतको त्यो हस्तक्षेप । उत्तरतिर सम्बन्ध राख्न डराएनौं । त्यसैले अहिले तपाईंले भने झैं भारत हाम्रा अगाडि म्याउ गर्ने भो । गर्दा त सकिन्छ भन्ने देखियो नि । हो यहि काम दोहोर्याउनु होला भन्छु ओलीजीलाई ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिर्वतनलाई मध्यनजर गरेर छिमेकीको पनि विदेश नीति फेरिएको देखिन्छ । भारतले भारतमै हुर्काएको दलाई लामाको कार्यक्रममा नजान उर्दी जारी गर्यो, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन भनेर यहिँ आए । यो भू–राजनीतिक परिर्वतनले के संकेत गरेको छ ?
हैन, इतिहासले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने जोसुकै होस्, त्यसलाई हेर्दा जनताको पक्षबाट उभिएर हेर्यो भने उ पनि होचो देखिन्छ । हामीले बसेर अरुलाई हेर्यौं भने न उ अग्लो देखिन्छ, उठेर हेर्दा त बरावर नै देखिन्छ नि । त्यसो हुँदा देशको स्वाभीमान बचाउने कसरी भन्ने विगतमा हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । भुइँमा बसेर, उसैलाई हात जोडेर हेरेकाले हामीलाई हेपेको हो । हिजो उसका सामु घुँडा टेकेर, उसैलाई हात जोडर अनुनय विनय गर्थे, अनि हेप्थ्यो । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उसले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि उठेर आँखा जुधाएर हेर्यो । त्यसैले यो सबै परिवर्तन भएको हो । हिजो नेता भन्नेले झिनो स्वार्थमा देशलाई भोग दिएका थिए । हामीले आँखा जुधाएर फिर्ता ल्यायौं । अव जुनसुकै छिमेकीसँग समानताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता आफ्नो पार्टीको दशौं महाधिवेसनको निम्तो दिन नेपाल आउँदा मैले एउटा अन्र्तवार्ता लिएको थिएँ । त्यो अन्तरवार्तामा उनीहरुले नरेन्द्र मोदीको साख गिर्दोछ । उनीसँग छिमेकीहरु पनि रुष्ट छन् । ओलीलाई सबै छिमेकीको पनि साथ छ । दक्षिण एसियामा उदाउँदो नेताको रुपमा ओली आउँदैछन् भनेका थिए । तपाईंलाई के लाग्छ ?
ओलीको इतिहास मलाई थाहा छ । सँगै बसेको पनि छु । उनको राम्रो पक्षलाई मैले सर्मथन पनि गरेको छु । हाम्रो उनलाई विनास्वार्थ सहयोग रहन्छ । अरुले के दिन्छौ भनेर सहयोग गर्छन् । तर हामी उनलाई देश बनाउने कुरामा विना स्वार्थ सहयोग गर्छौं । उचाईको नेता भनेर अहिल्यै किन भन्नु । उनको अग्निपरीक्षा छ । यसमा उत्रनुपर्छ । महत्वकांक्षा नराखी देशका लागि काम गरे भने नहुनु पर्ने कारण के छ र ?
एउटा फरक प्रश्न गरौं है ? तपाईं सादगी नेता भनेर चिनिनुहुन्छ । पार्टीको प्रमुख ब्यक्ति भएर पनि पछिल्लो समयमा ओझेलमा बस्नुभयो । किन राजनीतिबाट सन्यास लिनलाग्नु भएको हो र ?
होइन, खासमा म विमारी छु । त्यसले गर्दा म चुनावमा पनि उठिनँ । स्वास्थ्यको कारणले नै हो म पछि हटेको । स्वास्थ्यले साथ दिएको खण्डमा फेरि सक्रिय हुन्छु । पार्टीको ठूलो जोड थियो उठिदिनोस् भन्ने । चुनावमा उठिमात्र दिनोस् अरु सबै काम हामी गर्छाैं, हामी जिताउँछौं भन्दै एमालेका साथीहरु आउनु भएको थियो । मैले यसो नगरौं, मै संसदमा गएर बोल्नै नसक्ने भएपछि के गर्नु भनेर मानिनँ । तर मैले पार्टीको काम यहिँ बसेर सक्ने जति गरि नै रहेको छु । गरिरहने छु ।